I-Semalt: Izizathu Eziyisisekelo Zokuvimbela Ukudlulisa Ugaxekile Ku-WordPress ne-Google Analytics
Ugaxekile ungasebenzisa isikhala se-server ukuthumela i-malware, iTrojans, noma ama-virus noma ukuhlukumeza ukukhubazeka komsebenzisi futhi uthumele wona ngokuqondile i-malware ne-virus. Noma yikuphi, ugaxekile udinga umsebenzisi, kodwa umsebenzisi ngokuqinisekile akawudingi. Uma uvula i-WordPress, kubalulekile ukuthi umuntu asebenzise amathuluzi okuvimbela ukungena ngogaxekile.
Ugaxekile wokudluliselwa kolunye uhlobo oluthinta i-WordPress futhi lungaba nemiphumela emibi ohlelweni lwe-Google Analytics. It preys on simo simo kuwebhusayithi s kanjalo ukuguqula algorithms ngokumelene nalo. UJack Miller, iMenenja Yokuphumelela Kwemakhasimende Ephezulu Semalt , uthi inqubo engcono kakhulu ukuvimbela ugaxekile wokudlulisela kokubili ku-Google Analytics ne-WordPress.
Inenhloso eyodwa okungahambisani nokusebenza kwezinjini zokusesha. Abakwa-Spammers bathumela izixhumanisi eziningi nama-URL ekuhlosweni kokuthuthukisa isikhundla sewebhusayithi ethile. Ngokuvamile izixhumanisi ezikhohlisayo kodwa njalo zixhumanisa nesayithi elithile. Ngamafuphi, kuyisinqamuleli sokuthuthukisa izikhundla zokusesha ngaphandle kokunikeza noma yikuphi okuqukethwe okubalulekile. Uma umbiko we-analytics uhlanganisa lo mgwaqo ekubikweni kwawo, kuzokusho ukuthi iwebhusayithi ixhuma emuva kumasayithi omgangatho ompofu. Ithuthukisa isimo sesayithi, kodwa uma i-Google ibonisa le nqubo, bayalungisa isayithi ukuze basebenze ndawonye newebhusayithi engafanelekile.
i-Google nezinye izinjini zokusesha ziye zavela ngendlela yokuvikela ukuvimbela ukuhanjiswa kogaxekile kumasayithi. Noma kunjalo, abasebenzisi bayelulekwa ukuba bathathe izinyathelo zokuqapha kanye nokunciphisa izinkinga.
Ukudluliselwa kogaxekile kuthola igama layo ngendlela esebenzelana ngayo ne-Google Analytics. Njengomnikazi wewebhusayithi, umuntu angathanda ukubona ukuthi yiziphi amawebhusayithi aqondisa ukuthungatha isayithi kusayithi. Abakwa-Spammers basebenzisa lokhu futhi banethemba ukuthi bachofoza kumawebhusayithi abo ngenkathi bebhekisela ku-Google Analytics Umbiko.
Izinzuzo zokuvimbela ukudluliselwa kogaxekile
Ukufaka okulodwa kokugaxekile okudluliselwa kuyo ukuthi kuzophazamisa izikhundla zokusesha zekusasa lekusasa. Ukuze uhlale uphumelele emkhankasweni wokumaketha, umuntu kumele aqinisekise ukuthi isayithi liyaqhubeka nokuletha okuqukethwe kwekhwalithi kubavakashi bayo. Ukutholakala kogaxekile okudlulisela phambili kuphazamisa le njongo. Ngakho-ke, ukuvimbela kufanele kube yiwebhusayithi yomnikazi kusukela ekuhlanganiseni kwezixhumanisi ezimbi emapulatifomu abo..Konke abakwenzayo kwenza kube nzima isivakashi ukuthola okuqukethwe okufanelekile. Okokugcina, kukhona futhi okungenzeka ukuthi umuntu angachofoza kuwebhusayithi equkethe okuqukethwe okulimazayo.
Ukuvimba ukugaxekile kogaxekile ku-WordPress ne-Google Analytics
Faka i-Plugin ye-Referral Spam
Dlulisa amehlo ekhasini le-plugin ye-plugin ye-spam bese ulanda futhi ufake ama-plugin kudeshibhodi ye-WordPress. Ivula zonke izici zayo nezilungiselelo. Bese kusebenze i-plugin. Amanye amathuluzi ongawasebenzisa yi-Sucuri, i-SpamReferrerBlock, noma i-WP Block Referrer Spam.
Kukhona ithebhu ngakwesobunxele se-WordPress ekhonjiswe njengogaxekile. Chofoza kuso kanye nenketho elandelayo yogaxekile yokudlulisela elandelayo. Khetha inketho ku-Update Update ukuze uqinisekise ukuthi ivimbela ukugaxekile kogaxekile nsuku zonke. Ku-Block Mode, khetha i-Rewrite Block njengoba isebenza ngokushesha futhi isebenza ezingeni leseva. Ngaphansi kokubuyekezwa kwe-Manual, yilapho kuchazwa khona ukuhlonza okuthunyelwe okukodwa, ikakhulukazi uma kukhona isixhumanisi esolisayo esingahlanjulwanga okwamanje.
Ukuhlola ukugcina okubuyekezwayo kanye namabhuloki angokwezifiso
Enye ikhasi le-spam lokudlulisela phambili, kukhona inketho ephezulu ephezulu yokubuyekeza, okuchaza lapho umsebenzisi enza isibuyekezo sokugcina. Ithuluzi elihle kakhulu elikhombisa ukusebenza kahle kwe-plugin. Uma kukhona ama-URL ambalwa e-spammy kulo mbiko, kopisha futhi unamathisele isixhumanisi ebhokisini lamabhuloki ngokwezifiso ngendlela yokusebenzisa. Bese ulondoloze zonke izinguquko uphume.
Buka Amasayithi avinjelwe
Chofoza kuthebhu ye-Referrer Spam bese ukhetha Zonke Amasayithi avinjelwe. Ivula iwindi ngawo wonke ama-URL avinjelwe, futhi omunye angawavula ngaphandle kokusongela.
Ukuqeda u-Spam Referrer Ugaxekile
Vula i-Google Analytics ukuthola ukuthi isebenza kanjani. Ezinye zezindawo zingase zifinyelele ngoba zibizwa nge-Ghost zisho ukuthi azifinyeleli kusayithi ukuze ama-plugin awakwazi ukuwavimbela. Landela inqubo elandelayo: chofoza kubalaleli, khetha ubuchwepheshe, bese u-Network. Thola bese ukhetha Igama lomngane njenge-primary dimension. Qaphela zonke izizinda bese wenza uhlu lwazo zonke ezisemthethweni. Chofoza ku-Admin, izihlungi, engeza izihlungi, uhlobo lokuhlunga lwesiko, bese ufaka. Khetha ukulondoloza nokuphuma. Buyela emuva kudeshibhodi ukuze ubone ukuthi isebenza manje.